Itoophiyaan addunyaatti biyyoota fayyadamtoota interneetii miidhan keessaaa lammaffaa jedhamte - BBC News Afaan Oromoo
Itoophiyaan Chaayinaatti aanuun Sooriyaa waliin haala walmadaaluun fayyadamtoota interneetii fi moobaayilaa daangeessuun adduunyaa keessatti sadarkaa lamaffaa irratti argamti jechuun Friidom Haawuus beeksiiseerra.
Itiyoo Teleekoom gama isaatiin ''tajaajilli interneetiis ta'e moobaayilli Itoophiyaa keessatti cufamee hinbeeku,'' jedheera.
Mootumoonni Ruusiyaa fi Chaayinaa akkaataa irratti hinbeekamnee fi ammayyaa ta'een marii inteerneetiin godhamuu hambisuuf hojii isaan eegalan addunyaa irratti babal'ateera jechuun Friidom haawuus ibsa.
Akka Friidoom of Ze Neet (Freedom of the the Net) gabaasetti, Itoophiyaan safara ''0=bilisummaa fayyadama interneetti bakka jiruu, 100=bilisummaan interneetii bakka hinjirre'' kan jedhuun madaalamuun Sooriyaa waliin qabxii walfakkaata 86 fiduun Chaayinaatti aantee ramadamteetti. Gabaasni kun biyyoota 65 keessatti kan geggeefame wayita ta'u Ertiraa fi Kooriyaan Kaabaa qorannoo kana keessatti hinargamani.
Itiyoo Teleekoomitti daayreektarri komunikeeshinii obbo Abdulraahimaan Ahmeed BBC'tti ''tajaajilli inteerneetiis ta'e kan moobaayila Itoophiyaa keessatti cufamee hinbeeku. Kanaan dura wayita qormaanni biyyooleessa kennamutti Oveer Ze Toop (Over The Top) kan jedhamu Feesbuukii fi midiyaalee haawaasaa fayyadamuu kan dandeesisuu sana yeroo murtaa'aaf cufama malee biyya keenya keessatti interneetiin cufamee hinbeeku,'' jechuun dubbataniiru.
Obbo Abduraahimaanis itti dabaluun, gabaasi kun dhaabbanni Friidom haawuus yaada mataa isaarraa ka'e kan baaseedha malee dhugaa jiru kan muli'su miti jedhaniiru. ''Kan nu madaaluu danda'an dhabbatoota misooma bu'uuraa keenyaa beekan kan akka Tokkummaa Telekominikeshenii Adduunyaa (ITU) fi ICT Afriikaa malee gabaasni inni kun amanamummaa hinqabu,'' jechuun dubbataniiru.
Friidom Haawuus bara 1994tti biyya Ameerikaatti keessatti kan hundeeffame wayita ta'u, dhimmoota mirga dhala namaa, walabummaa dimookraasii fi siyaasaa ilaalchisee hojii qorannoo fi beeksiisuu/degeersaa kan hojjechaa jiruudha.
Friidom Haawuus gabaasa waggaa isaa mata duree ''Miidiyaalee hawaasaa danquun dimookraasii irratti dhiibbaa uumuu'' jedhuun kan baase wayita ta'u, Itoophiyaa ilaalchisee Mootummaan Itoophiyaa naannoolee gaaffiin mirgaa ka'an keessattu naannoo Oromiyaatti tajaajila interneetii ni cufa.
Midiyaaleen haawaasaa fi fayyadamni (applications) akka hinhojjenne godha
Marsariitii waa'ee siyaasa gabaasan cufee tureera jechuun tarreessa.
Itti dabaluunis biyyatti keessatti telekoom ilaalchisee miisooma bu'uuraa dadhabaa ta'e, tajaajilli telekoom to'annoo mootummaa jala jiraachuu fi imaammata tajaajila kana daangeessu hordoofuunis sababoota biroo keessaa muraasa jedhee tarreesuun gabaaseera.
Itiyoophiyaa keessatti keeyyata 19 (article 19) yaadaa ofii bilisummaan ibsachuu fi bilisummaa odeeffannoo irratti hojjechaa kan turee fi amma Itoophiyaa kad lakkisee akka bahu kan goodhame Paatriik Mutaahiis ''akkan gamaagameetti Friidom Hawuusiin gabaasni dhihaate haala Itoophiyaa sirriitti kan ibsuudha'' jechuun yaada keenneera.
Itti dabaluunis namoonni quunnamtii interneetaa fi moobaayilaa ittin wal ijaaruuf, yaadaa walii hiruu, fi dadamaqsuuf itti fayyadamu. kun immoo mootummaa Itoophiyaa baay'ee yaaddeessa waan ta'eef marsaritii ofii hinbarbaanne ni cufa, tajaajila interneetii fi moobaayilaas yeroo barbaadetti ugguruu amaleefateera jechuun Paatriik ibsa.